३ बच्चाले गाएको नेपाली गीत इन्डियामा भाइरल भएपछी अभिनेता अनुपम खेरले स्टाटसनै लेखेर यसो भने - Mitho Khabar
June 25, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on ३ बच्चाले गाएको नेपाली गीत इन्डियामा भाइरल भएपछी अभिनेता अनुपम खेरले स्टाटसनै लेखेर यसो भने
बलिउड अभिनेता अनु`पम खेर सामाजि`क सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छन् । उनी आफ्नो फ्यान्स माझ चर्चामा रहिरह`न पछिल्लो समय रोचक पोस्ट गरि`रहन्छन्। अनुपमको बच्चाहरुसँग खास लगाव छ र उनी सामा`जिक सञ्जालमा बच्चाहरु`सँग सम्बन्धित पोस्ट गरिर`हन्छन्। हालै उनले सडकमा गीत गाइर`हेका तीन बच्चाको अत्यन्तै क्युट भि`डियो शेयर गरेका छन्।
ती बच्चाको समू`हलाई अनुपमले ‘बेस्ट म्युजिक ब्याण्ड’ बता`एका छन् र आफ्नो तर्फबाट अवार्ड पनि दिएका छन् । यो भि`डियो शेयर गरी अनुप`म खेरले लेखेका छन्-सबैभन्दा बेस्ट म्युजि`कल ब्याण्ड !! म यिनलाई वर्ल्ड टूरमा लैजा`न चाहन्छु। मेरो विचा`रमा यी बच्चाहरुले अस्पष्ट उच्चारणमा आशा र सधैँ एक राम्रो समय`को सम्भावनाबारे गाइर`हेका छन्।
मला`ई लाग्छ यो गीतको शब्दले दुनियाँ अहिले जुन कठिना`ईबाट गुज्रिरहेको छ त्यस`बारे बता`ईरहेको छ । तर शायद हामी सबै ठिक हुनेछौँ।सबैभन्दा उत्कृष्ट गीतको मज्जा लिनुहोस् । म यिन`लाई ग्रामी अवार्डको लागि नोमिनेट गर्न चाहन्छु र यिनलाई विजेता घोषित गर्छु । तपाई पनि सह`मत हुनुहुन्छ नि ?
साउदीमा उडानको तोकियो मिति
आलुका बोक्रा यति धेरै उपयोगी, गर्छ यि रोगलाई फाइदा
चितवनमा थप येति जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण
क्याफेको शौचालयमा गाेप्य क्यामरा
January 30, 2020 mithokhabar
खानेतेलको मुल्य घटयो, प्रतिलिटर कति पुग्यो
June 22, 2021 Mitho Khabar